Soomaalida iyo Dadkii Kale ee Ku Geeriyooday Shilkii Diyaaradda Ethiopia Oo La Siinayo Lacag Magdhow | Garadag News
Soomaalida iyo Dadkii Kale ee Ku Geeriyooday Shilkii Diyaaradda Ethiopia Oo La Siinayo Lacag Magdhow
Waxey saxaafadda dalka Itoobiya hadal hayaan in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay dooneyso iney ku dhaqaaqdo tallaabo dib usoo celin karta kalsoonida macaamiisheed iyadoo lacago magdhaw ah siin doonta dadkii ku geeriyooday shilkii diyaaradeed ee 10-kii Maarso ka dhacay meel u dhaw Adis Ababa.
Waxey warbaahinta caalamka isku raaceen in 157-qofood oo saarnaa mid ka mid ah diyaaradaha ay leedahay shirkadda Ethiopia Airlines oo u kala dhashay 35 wadan oo caalamka ah ay geeriyoodeen, sidoo kalana waxaa musiibadaas ku jiray lix qofood oo Soomaali ah balse qaarkood watay dhalashada waddamo kale.
Diyaaradda waxey ku wajahneed magaalada Nairobi ee dalka Kenya, balse burburkeeda ayaa yimid markii ay lix daqiiqo kaliya ka duushay garoonka, waana mid ka mid ah dhacdooyinka la xasuusan doono ee geeska Africa ka dhacay sanadkaan.
Qoysaska dadkii ku geeriyooday shilkaan ayaa heli kara lacag cadadkeeda lagu sheegay 17 ilaa 25 Milyan oo Doolar, waxaana si hoose loo helay in dhawr meelood lagu jaangooyn doono sida loo bixinayo lacagta – dhanka da’da, shaqada iyo booska ay kaga jireen nolosha reerkooda ayaana loo cuskan doonaa.
Sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda ay diyaaradda ka burburtay ayaa ka dhawaajiyay sidoo kale in hanaanka caalamiga ahna uusan meesha ka marneyn: “Xeerarka caalamiga ah ayaa lagu saleyn doonaa Magdhawga”.
Sidoo kale sarkaalkaan oo aan magaciisa la sheegin ayaa xaqiijiyay in muddo 18 bilood gudaheed ah ay ku bixin doonaan lacagaha magdhawga ah.
Baaritanno ayaa socda wali kuwaas oo la doonayo in lagu ogaado sababta ka dambeysay iney dhacdo diyaaraddaas, balse nasiib darro wali lama ogaan sababta rasmiga ah.
Sidoo kale warar aan lagu kalsoonaan karin ayaa sheegaya in xogtii laga soo saaray sanduuqa madow ee ay diyaaraddu leedahay isla markaana lagu aruuriyo xogaha diyaaradda, waxaana la helay sanduuqaas maalintii xigtay maalinka musiibadu dhacday.
Caqabad weyn ayaa soo food saartay shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines taasoo loo tixgeliyo iney ka mid tahay diyaaradaha ugu tunka weyn adeeg ahaan ee geeska Africa, dadyowga ayaana mar walba weydiiya sida uu yahay bad qabka qofka isticmaala adeegooda, walow hakad la galiyay dhamaan wixii shaqo duulimaad ah oo ay shirkaddaan ka fulineysay daafaha caalamka.